Ny sasany aminareo dia mety manontany tena hoe inona ny atin'ny atin'ny atiny. Misy atiny mampihomehy iray navoaka tao amin'ny Internet tamin'ny alàlan'ny Twitter, Facebook, bilaogy, vaovao, Youtube ary mpampita vaovao hafa. Ny mety dia manan-danja amin'ny mpihaino anao ny sasany amin'ireo atiny ireo - saingy mitaky fandalinana, sivana ary fampisehoana amin'ny fomba mahasoa izany. Amin'ny Martech Zone, mandrindra atiny betsaka izahay. Ohatra iray amin'izany ny infografika. Raha mahita taonina isika